armaajooyinka jiifku waa ka golaha wasiirada ee kitfo, armaajooyinka xaraynta, sida saafi ah, armaajooyinka jiifku lagu daro waa in ay shubo sida golaha wasiirada kala duwan waa in ay leedahay shaqada qaar ka mid ah, laakiin sidoo kale waxay leeyihiin hawo wanaagsan, aad u muhiim ah waxaa la dhigayaa golaha wasiirada jiifku ay sabab u tahay qalabka, sidaas darteed waxaa jira functional u baahan ...Read more »
golaha Network, taas oo waxaa loo isticmaalaa in la isu geeyo guddiga sii kordhaya,, sanduuqa fur-in ay fur-in, qayb ka elektaroonik ah, qalabka iyo meelaha farsamo oo ka kooban, sidaa darteed sida in la sameeyo sanduuq rakibo. Sida laga soo xigtay nooca hadda, golaha server, golaha derbi, golaha network, ca caadiga ah ...Read more »
1 diyaarinta First of dhan, inay ku wargeliyaan user ah in ay dhacdo user uusan saamayn ku lahayn hawlgalka caadiga ah ee ay dhacdo in golaha wasiirada. Markaas sida uu qaab-dhismeedka network topology ah, qalabka jira, tirada dadka isticmaalaya, dadka isticmaala iyo arrimo kale oo si dulmar ku kala duwan arrimaha, sida ...Read more »
golaha Network waa in ay leeyihiin qaab farsamo wanaagsan. Dhismaha golaha wasiirada waa in lagu saleeyaa korontada, guryaha farsamo iyo isticmaalka deegaanka, si loo xaqiijiyo in qaab dhismeedka Golaha Wasiirada ayaa rigidity wanaagsan iyo xoog, iyo go'doon electromagnetic wanaagsan, grounding, ...Read more »
In Century kow iyo labaatanaad, teknoolajiyadda macluumaadka ayaa noqday foomka caadiga ah. Ka dib oo dhan, waxaa jira war ah kama on horumarinta bulshada ee dhaw. Dhab ahaantii, macluumaad ah ee dalalka kala duwan waa ka fog tahay shuruudaha ugu fiican, ama u baahan in wax laga badalo si loo dhamaystiro. Iyadoo com guud ...Read more »
Ammaanka iyo xasiloonida golaha wasiirrada inuu keeno nooca isbedel
Iyadoo horumarinta iyo hagaajinta of technology ee golaha wasiirada, golaha waxaa si balaadhan looga isticmaalaa dhinacyo kala duwan. Sida laga soo xigtay waxqabadka kala duwan ee qalabka, golaha wasiirada waxaa si tartiib ah usoconaa jihada of takhasuska. Si loo go'aamiyo inuu chassi tayada ...Read more »
Maxay yihiin saddex arrimood oo waaweyn oo saamayn nolosha adeegga nidaamka Haydarooliga ah?
Dhamaan badeecada leeyihiin isticmaalka nolosha, waxay yeelan doonaan wax soo saarka, isticmaali, dhamaadka ah saddex tallaabo. Waayo, nidaamka Haydarooliga, haddii isticmaalka muddo dheer ee isticmaalka muddo dheer, sidaa darteed waa waqti in la beddelo. Bedelka tahay oo kaliya sababaha caadiga ah ee bamka Haydarooliga, dhab ahaantii, saamaynta Haydarooliga ku ...Read more »
Sida looga hortago caag miridhku caaryada duro
Dad badan oo wax dherer variable of time muuqan doona xaaladda miridhku. Iyo miridhku ku this in wax bir ah waa ugu xaaladda. Waayo, wax soo saarka loo isticmaali doonaa in caaryada sidoo kale dhici doono dhibaatadan. Oo dhibaato this, waxaan u baahan nahay in la qaban, oo ogahay sababta ay jirto sabab sababta th ...Read more »
Shiinaha Changzhou guulaha technology saarka sare
Toddobaad Shiinaha Changzhou guulaha technology saarka sare bandhig cadaalad ah May 18, 2012 subax, toddobaad Shiinaha Changzhou hormartay soo saarta guulaha technology cadaalad bandhig sayniska Changzhou iyo Technology City bilowday. Changzhou duqa magaalada Yao Xiaodong p ...Read more »
ayuu 2015 Warbixinta sahanka on saamaynta warshadaha iyo Internet horumarinta maal suuqa mustaqbalka
In da'da macluumaadka, technology Internet ayaa daalaeday galay dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha dadka, beddelo dadka caadooyinka isticmaalka iyo dabeecad. Internet waxaa sidoo kale si weyn saamaynaya iyo beddelo dhammaan qaybaha nolosha. Ka dib markii dhar ah, 3c digital, Chai qalabka guriga ...Read more »
Talooyin Qaar ka mid ah oo ku saabsan iibsashada golaha shabakad
In dareenka, golaha network waa sida DIY ku rakiban ee jiifku ka, armaajooyinka iyo qalfoofka la odhan karaa in ay si xun ugu noqon isku mid ah, Annagu waxaannu nahay in iibka ah ee jiifku network oo xirfadaha? isgaarsiinta The Wuhan saarayaasha golaha JF faahfaahinta. First, golaha network si aad u tixgeliso ...Read more »